नासा Archives - Lokpati.com
Tag - नासा
अन्तर्राष्ट्रिय • विश्व
क्रिस्टिना कोचको अन्तरिक्षमा ३२८ दिन
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) की ४१ वर्षीया क्रिस्टिना कोचले अन्तरिक्षमा ३ सय २८ दिन बिताएर फर्केकी छन् । झन्डै एक वर्ष लामो अन्तरिक्ष यात्रापछि बिहीबार कजाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रस्थित हिउँले सेताम्य जमिनमा...
आकाशीय पिण्डसँग ठाेक्किनबाट जाेगियाे पृथ्वी, नासाले के भन्याे ?
वाशिङटन। ठूलाे दुर्घटनाबाट पृथ्वी जाेगिएकाे छ । पृथ्वीको नजिकैबाट गुज्रिएको एउटा आकाशीय पिण्डसँग ठोक्किनबाट पृथ्वी जोगिएको हाे।
सो आकाशीय पिण्ड ठोक्किएको भए पृथ्वीमा ठूलो क्षति हुन सक्ने अवस्था भए पनि पृथ्वी त्यसबाट...
अर्को हप्ता विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिक आउने नासाकाे दाबी
एजेन्सी । ‘२००६ क्यूक्यू २३’ नाम दिइएको क्षुद्रग्रह अगष्ट १० मा पृथ्वीको अत्यन्त नजिक आउदैंछ । नासाका अनुसार क्षुद्रग्रहको व्यास १८७० फिट रहेकाे छ ।
यो सामान्यताभन्दा ठूलो आकारको क्षुद्रग्रहमा पर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन्...
चन्द्रमा खुम्चिँदै गएको नासाको निष्कर्ष
एजेन्सी। अमेरिकी अन्तरीक्ष निकाय नासाले चन्द्रमा लगातार खुम्चिँदै गएको बताएको छ। नासाले १२ हजारवटा तस्वीरको अध्ययन गरेर पृथ्वीको एक मात्र उपग्रह चन्द्रमा लगातार खुम्चिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो।
पृथ्वी खतरामा रहेको नासाको दाबी
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले सूर्यमा प्वाल देखिएको दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुको संस्था नासाले सूर्यमा प्वाल देखिएको र यसले पृथ्वीलाई नै खतरामा पार्न सक्ने बताएका हो।
नासाले सूर्यमा विशाल कालो छिद्र (प्वाल)...
भारतको मिसाइल परीक्षण खतरनाक भएकाे नासाकाे ठहर
एजेन्सी । अमेरिकाको अन्तरिक्ष प्रोग्राम एजेन्सी नासाको प्रमुख जिम ब्राइडेन्स्टाइनले भारतको मिसाइल परिक्षण खतरनाक भएको बताएको छ । भारतले उसकै भू उपग्रह खसालेको कार्यलाई ‘खतरनाक’ भएको नासाले बताएको हो ।
भारतले अन्तरिक्षको ३...
नासाको अन्तरिक्ष यान सबैभन्दा टाढाको दूरीमा, कहाँ पुग्यो ?
एजेन्सी । अमेरिकी नासाको यान अन्तरिक्षको अहिलेसम्मकै सबभन्दा टाढाको पिण्डसम्म पुगेको छ । ‘न्यू हराइजन’ नामक यान करिब साढे ६ अर्ब किलोमिटर टाढा पुगेको हो । यो नै अहिलेसम्म सौर्यमण्डलको सबैभन्दा टाढा पुगेको घटना हो ।
संस्कृत भाषा र ग्रन्थहरु सिक्दै नासा
काठमाडौं । राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरीक्ष प्रशासन (नासा) मा संस्कृत सिक्ने काम भइरहेको बताइएको छ । नासामा रहेको एक रिसर्च टीम संस्कृतको भाषाबाट नयाँ खोजको सुरुवात गर्न गइरहेका छन् ।
उनीहरु संस्कृतबाट अरु केही विकास गर्न...